एनआरएनए अष्ट्रेलियाको सदस्यतामा अप्रत्यासीत बृद्धि
नेपाली भिजन । एनआरएनए अष्ट्रेलिया को सदस्यता बितरणमा गएको बर्ष भन्दा तिनहजारले बढेको छ । ३० अप्रिल मध्यरातसम्म निर्धारण गरीएको समय भित्र अष्ट्रेलिया भरिबाट ८४४० सदस्यता पुगेका छन् । अन्तिम ३ दिन बाँकि रहदा सम्म करिब तिन हजारको हाराहारीमा भएको सदस्य संख्या झण्डै दुई गुणा बढ्नु संस्था प्रतिको मोह, नेतृत्वमा पुग्ने होडबाजी र प्रतिष्पर्धाको उपजनै मान्न सकिन्छ ।
नाफामुलक संस्थाको सदस्यता यसरी बढ्नुमा अष्ट्रेलियामा रहेका व्यापारी, बिभिन्न संघसंस्था, राजनीतिक भातृ संगठन लगायत एनआरएनएमा लागेकाहरु को भूमिका ठूलो रहेको देखिन्छ ।
राज्य अनुसारको सदस्यता बितरण:
एनएसडब्लु राज्य – ३५८८ अर्थात ४२ प्रतिशतको हाराहारीमा
क्वीन्सलेण्ड राज्य – १४४६ अर्थात १७ प्रतिशतको हाराहारीमा
भिक्टोरीया राज्य – १२२९ अर्थात १४ प्रतिशतको हाराहारीमा
वोष्ट्रन अष्ट्रेलिया – ९०८ अर्थात १० प्रतिशतको हाराहारीमा
नर्दन टेरीटोरी – ५४० अर्थात ६ प्रतिशतको हाराहारीमा
साउथ अष्ट्रेलिया – ५२१ अर्थात ६ प्रतिशतको हाराहारीमा
एसिटी – १६२ अर्थात २ प्रतिशतको हाराहारीमा
टिएयस – ४६ अर्थात ०.५ प्रतिशतको हाराहारीमा
एनएसडब्लु राज्यको सदस्यतामा बिगतको भन्दा खासै बृद्धि हुन सकेको छैन भने भिक्टोरीया, क्वीन्सलेण्ड र वोष्ट्रन अष्ट्रेलिया राज्यमा अपत्यारीलो तरिकाले सदस्यतामा बृद्धि भएको छ । एनएसडब्लु राज्यले अध्यक्ष पदमा उमेद्वारी दीन नपाउने भएकाले पनि अन्य मुख्य राज्यहरुमा सदस्यता बढेको देखिन्छ । डेमोक्रेटिकहरुको समुहबाट अध्यक्षमा भिक्टोरीयाका तोनु घोथाने र महासचिबमा क्वीन्सलेण्डका नारायण कोईराला उठाउने पक्का भएकाले पनि यी दुई राज्यमा सदस्यता बढेको संस्थामा लाग्नेहरुको बिश्लेशण रहेको छ ।
एनएसडब्लु राज्यबाट अध्यक्षमा उमेद्वारी दिन नपाउने भएपछि यस पटक उपाध्यक्ष पद धेरैको आकर्षणमा रहेको छ । डेमोक्रेटिकहरुको समुहबाट एनएसडब्लु राज्यका लागि संयोजक तथा उपाध्यक्षमा नन्द गुरुङलाई उभ्याइएको छ । अष्ट्रेलिया भरीबाट करीब १०० को हाराहारीमा सदस्यहरु निर्बाचित हुने यस संस्थाको निर्बाचन भने ८ जुलाई शनिबार हुने भएको छ । यस अघिनै डा. कृष्ण हमाललाई राष्ट्रिय निर्बाचन प्रमुखमा संस्थाले नियुक्ति गरी सकेको छ ।
हरेक दूई बर्षमा एक पटक नयाँ कार्यसमिति छान्दै आएको यस संस्थामा भएको सदस्यता बृद्धिले संस्थाको खातामा २ लाख ११ हजार डलर भन्दा बढि पैसा आम्दानि भएको छ । नेपाल र नेपालीका लागि बिभिन्न परोपकारी कार्य गर्दै आएको यस संस्थामा अप्रत्यासीत सदस्यता बढ्नुमा हालको २ बर्षको कार्यमुल्याकंन हुन सकेको बिश्वास संस्थाका अध्यक्ष सुरेन्द्र सिग्देल, उपाध्यक्ष दीनेश पोखरेल, अभिमानसिंह बस्नेत, प्रवक्ता डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मी लगायतले व्यक्त गरेका छन् ।